जयसिंह धामीको जीवनको मुल्य छैन ? मोदीको विरोध गर्दा देउवाको चित्त दुखेपछि – Butwal 24 News
September 6, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on जयसिंह धामीको जीवनको मुल्य छैन ? मोदीको विरोध गर्दा देउवाको चित्त दुखेपछि
काठमाडौं । भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको तार फुस्काएका कारण महाकाली नदिमा हराएका जयसिंह धामीको जीवनको कुनै मुल्य देखिएन । सरकारले अहिले सम्म भारतलाई त्यसवरे औपचारीक जानकारी समेत गराएको छैन । घटना छानविन गर्न बनाएको समितिले भारतीय पक्षसंग कुराकानी समेत नगरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । एक महिना पछि सो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
डुबान क्षेत्रमा ‘टिकटक बनाउँदै’ युवाहरु